कांग्रेस महाधिवेशन : उद्घाटन शुक्रबार १ बजे, को-को आउँदै छन् विदेशी पाहुना ? « News24 : Premium News Channel
कांग्रेस महाधिवेशन : उद्घाटन शुक्रबार १ बजे, को-को आउँदै छन् विदेशी पाहुना ?
काठमाडौं । भोलि (शुक्रबार) देखि नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन सुरु हुँदैछ । महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र भोलि १ बजे दिउँसो भृकुटीमण्डपमा हुने कार्यतालिका तय भएको पार्टी कार्यालय, सानेपाले जनाएको छ ।
अहिले उद्घाटन स्थल वरिपरि झण्डा र ब्यानर बोर्ड झुण्डिएका छन् । पार्टी कार्यालय, सानेपाका अनुसार भृकुटीमण्डपको प्राङ्गणको मञ्चमा १५० जनाभन्दा धान्ने मञ्च तयार गरिएको छ । उद्घाटनमा नेपालका विभिन्न राजनीति दलसँगै भारतको भारतीय जनता पार्टी र कांग्रेस आइका प्रतिनिधि आउँदैछन् ।
कोरोना महामारीका कारण काठमाडौं उपत्यका बाहिरबाट सहभागी नबोलाइएको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ । महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा महाधिवेशन प्रतिनिधि र सहभागी हुने सम्बन्धित व्यक्तिमात्र आउने बताइएको छ ।
महाधिवेशनमा ४ हजार ७ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ । प्राय सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि बिहीबार नै काठमाडौं आइसकेर महाधिवेशनको झोलासहितका सामग्री लिएर गइसकेको बताइएको छ ।
महाधिवेशनमा आएकाहरुलाई भोलिको उद्घाटन सत्रमा ब्रेकफास्ट र लन्चको व्यवस्था गरिएको छैन, डिनरमात्र व्यवस्था गरिएको छ । २५ गतेदेखि २७ गतेसम्म भने ब्रेकफास्ट, लन्च र डिनरको पूर्ण व्यवस्था गरिएको छ ।
महाधिवेशनमा खानपानको भव्य व्यवस्था गरिएको छ भने खानपानको जिम्मा गौशलाको अनुपम फूडल्याण्डले लिएको छ । र, महाधिवेशनभर फूडल्याण्डले खानपिनको प्रबन्धसहित दक्ष सेफहरु परिचालन गर्ने भनिएको छ ।
उद्घाटन सत्रपछिका कार्यतालिका
उम्मेदवार मनोनयन दर्ता मङ्सिर २५ गते बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म गरिने समितिले जनाएको छ । त्यसपछि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताउपर दाबी विरोध र जाँचबुझ मङ्सिर २५ गते साँझ ५ देखि ७ बजेसम्म र दाबी विरोधउपर निर्णय मङ्सिर २५ गते साँझ ७ देखि ९ बजेसम्म हुनेछ ।
उम्मेदवारको पहिलो नामावली प्रकाशन मङ्सिर २५ राति १२ बजेभित्र गरिसकिने समितिले जनाएको छ । मनोनयन पत्र फिर्ता लिनका लागि मङ्सिर २६ गते बिहान ११ बजेसम्मलाई तोकिएको छ ।
उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन मङ्सिर २६ गते दिउँसो १ बजेभित्र गरिसकिने समितिले जनाएको छ । त्यसपछि मतदान मङ्सिर २७ गते बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुने समितिले जनाएको छ ।
मतदान सकिएपछि मतगणना सुरु हुनेछ । र, सभापति पदको मतगणना मतदान समाप्त भएपछि महाधिवेशन अन्त्य हुनेछ।
तर, यदि कथमकदाचित सभापति पदको दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्नुपर्ने सिर्जना भएमा राष्ट्रियसभा गृह, भृकुटीमण्डपमा लगत्तै मतदान गरिनेछ ।
मतदान भृकुटीमण्डप र राष्ट्रियसभा गृहमा मतदान हुने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ। मतदानमा २९ किसिमका मतपत्र रहेका छ ।
को कसरी निर्वाचित हुँदै छन् ?
बिहीबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पारित गरेका प्रतिवेदन र प्रस्तावहरु महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीमध्ये एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र आठ सहमहामन्त्रीको निर्वाचित हुने व्यवस्था छ भने कोषाध्यक्ष केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ।
यससँगै महाधिवेशनबाट ३५ खुला केन्द्रीय सदस्य, महिला नौ, प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जनाका दरले २१, दलित नौ, आदिवासी(जनजाति १५, खस÷आर्य १३, मधेसी नौ, थारु चार, मुस्लिम तीन, पिछडिएको क्षेत्रबाट एक, अल्पसङ्ख्यक बाट एक, अपाङ्गबाट एक सदस्य गरी कूल १३४ पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्वातित हुनेछन् ।
महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापतिले पछि ३३ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्नेछन् ।